नेपाली कांग्रेसलाई संवैधानिक संकट: पार्टी नै खारेज हुनसक्ने
काठमाडौं- तोकिएको समय महाधिवेशन नहुने अवस्था बन्दै गएपछि नेपाली कांग्रेसलाई संवैधानिक संकट पर्ने देखिएको छ । कांग्रेस विधानअनुसार पार्टी सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । तर, असाधारणस्थिति भएमा बढीमा एक वर्ष अवधि बढाउन सकिने विधानमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले महाधिवेशन ‘के कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा केही दिनमा बैठक बसेर निर्णय लिइने’ जानकारी दिएका छन् ।
‘कोरोनाका कारण भौतिक उपस्थित भएर महाधिवेशन हुने अवस्था छैन, अब के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. महतले बिहीबार राजधानीसँग भने, ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएकै छैन ।’
कांग्रेस संस्थापनइतर समूहले भने ‘१४औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्न सकिने’ बताउ“दै आएको छ । यसका लागि विकल्पमा जान सकिने सो समूहले औंल्याएको छ ।
कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर मानिएको रामचन्द्र पौडेल समूहले हालसम्म आएका क्रियाशील सदस्यकको नाममध्ये विवादरहित छानेर आएकामध्येबाटै मतदान गरेर नेतृत्व चुन्ने वा १३औं महाधिवेशन प्रतिनिधिबाटै नेतृत्व छान्ने विकल्प दिएको छ ।
नेता पौडेलले ‘अब पनि तोकिएको समय महाधिवेशन गर्न नसकिए पार्टी वैधानिक र संवैधानिक रूपमै संकटमा पर्ने’ बताउँदै आइरहेका छन् ।
सो समूहको बुधबार बसेको भर्चुअल बैठकले पनि सोही निर्णय गरेर सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने जिम्मा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई दिएको छ । सोही विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक मागसमेत पौडेल समूहले गरेको छ ।
गत १३ जेठमा प्रेस युनियन स्थापना दिवसमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममार्फत नेता पौडेलले प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यसबखत सो प्रस्तावमा सभापति देउवाले छलफल गर्न सकिने जवाफ दिएको महेश्वर गौतमले राजधानीमा लेखेका छन् ।